Iziphumo zokutshintsha ukusuka kwiArcMap ukuya kwiArcGIS Pro-Geofumadas
NgoNovemba, 2018 ArcGIS-ESRI, Ukuprinta kokuqala
Ukuqhathaniswa neenguqulelo zeArtMap Legacy, i-ArcGIS Pro iyisicelo esiphezulu kunye nesisebenzisayo, yenza lula iinkqubo, iifowuni, kwaye iguqule kumsebenzisi ngokusebenzisa isikhombisi-sikhokelo sayo esenziwe ngokwezifiso; unokukhetha umxholo, ukulungiswa kwesikhombisi, izandiso, kwaye akufanele ukhathazeke ngokukhipha ngaphambili xa kukho ukuhlaziywa okutsha.
Yintoni enye esinokuyilindela kwi-ArcGIS Pro?
Okokuqala, ukwakhiwa kwayo kusekelwe kwi-bits 64, kubandakanya izicelo ezifana ArcCatalog, ArcGlobe o ArcScene, kukuvumela ukuba uphewule ngexesha elifanayo kwi-2D kunye ne-3D, ungagcina kwiprojekthi enye.aprx Iimephu ezininzi, izakhiwo, iinkcukacha, iibhokisi kunye neendlela.
Kwinqanaba elisebenza kakuhle, unokuqhuba iinkqubo eziliqela kanye, kwaye usebenzise imisebenzi eyokwenza ubomi bakho bube lula, nangona kunjalo, kwii-928 zixhobo. ArcMap, Ukusukela kumhla wokwakhiwa kweli nqaku, zifunyenwe kwi-Pro kuphela ezingama-723. Kulindeleke ukuba ekupheleni konyaka ka-2018 yonke imisebenzi idityanisiwe, kubandakanya Iproplate Fabric ebizwa ngoku Rekhodi yomhlabas
Isantya sokunyakaza phakathi kweembono siphuthuma kwaye sishukumisa ngakumbi, esiyintuthuko. Ukuba sibuyela emva kwaye sikhumbula indlela isebenza ngayo ArcMap, kwafuneka sisebenzise iqhosha elungileyo kwaye iiprojethi zemenu zedatha zaboniswa, makube ngumgca we-vector, i-raster njl njl Kwimeko ye-ArcGIS Pro, iinkqubo ezinjengoku: ukubeka uphawu, okanye ukufuzisela impawu zilula, ngenxa yemenyu yesitayela ibhendi o tape, enobungane, imeko kunye nokuhleleka: isitayela esele sijwayele kubasebenzisi be-AutoCAD okanye i-Microsoft Office.
I-ArcGIS Pro iimpawu ofuna ukuzenza engqondweni:
Ukuze ufumane iilayisenisi zokusetyenziswa kwePro, kufuneka sibhaliswe kunye nenhlangano, evumela ukuba sibe nolwalamano olusondeleyo nomsebenzisi. Iindidi zeelayisenisi zifana nezo zifumaneka kwi-ArcMap, IsiSeko, esiMgangatho kunye nesiThuthukile. Le GIS ingasetyenziswa kokubili intanethi, eqhagamshelwe uthungelwano lombutho wakho, okanye ukuba unako ukusebenza intanethi kunjalo, okt zokuqhawula mvume, okanye ukuba ngaba awunayo i-Internet kwakhona uyakwazi mvume ye ArcGIS zakho Pro, ngaphandle ngokuphazamisa.
Xa uqala ungabona iphaneli yeArcCatalog, apho ungayifumana khona imenyu apho izixhobo ozisebenzisileyo zithathwa. Kwiimephu ungabona zonke iimbono onayo ngaphakathi kwiprojekthi, kwibhokisi yeethuluzi okanye iibhokisi zeethuluzi imisebenzi esiyisebenzisileyo ukwenza imephu iya kubonwa, kwi izitayela zonke iimpawu okanye i-simbologías zifumaneka, zininzi zeemephu ze-3D njenge-2D, neeDathabheyisi ii-geodatabases esizenzileyo zibekwe, okanye zibandakanye naziphi na ezifunekayo kwiprojekthi yethu.
Kule mpaneli sinakho, iindawo zokufumana iithebula, i-geocoding, ukudibanisa kuzo zonke iindidi zamaseva njl. Yiyiphi inzuzo yale nto? Ukuba xa uvula le projekthi .aprx ulondoloze yonke idatha, kwaye unako ukuvula iprojekthi yakho kuyo nayiphi na ikhompyutha ebulela kwimimiselo yayo yelayisenisi, into engenziwanga .mxd ohlala kumatshini owodwa kwaye trabajarlos.En ngokwemiqathango umqondiso ukusuka apho, ungabona efanayo izinto ezifumaneka ArcMap ngaphandle Okungumahluko: ukudala iimephu ubushushu, olu khetho super fast kwaye ayifuni run naziphi na izixhobo ukwenza i data.
Enye yezinto ezininzi mkhulu kukuba akudingeki uvule kwaye ucime ukulungiswa rhoqo xa wenza utshintsho, okwakudingeka ukuba wenze kwi-Arcmap,
Kwipaneli yomxholo, apho iindawo zibonwa khona, zongeze iifayile ezintsha zeefayile okanye iitshathi, Oko kuya kukunceda xa uvelisa uhlalutyo oluyimfuneko, kodwa ukuba ufuna into ebonakalayo ngakumbi, njengokuboniswa, ungasebenzisa isixhobo se-infographic.
Ngokuxhomekeke kwisityuli esikhethiweyo, ivula iithebhu ezimbalwa kwibhanki apho unokufikelela khona uluhlu olupheleleyo lwezinketho. Ukususela kwimbonakalo, ukubhalisa kunye neminye imisebenzi efana neyifumane kwizandiso ezifana ne-Xtools Pro.
Idibanisa imisebenzi ephuculweyo imifanekiso, Unako ukuqhagamshela neeseva simahla kwaye ufumane imifanekiso yakho, okanye usebenzise omnye ozikhuphele ngaphambili, unale ndlela yokudala iimveliso-value added xa unqakrazo, njengoko ortorectificaciones, amafu ingongoma, NDVI, iimephu ubushushu, ukulinganisa njalo, kwaye ukuba awuyithandi nayiphi na ukusebenza, ophuhlisa ezakho wabelane nabanye abasebenzisi, yinto esebenzisa Qgis umzekelo, apho unokuba add-ons (plugins) okanye ufake enye eyenziwe ngumnye umntu osebenza naye.
Kwii-geologists, i-geophysicists kunye nezinye izazi-geos, i-ArcGis Pro idibanisa i-Geosoft eyongezelelweyo ukuba unokwenza iinkqubo zakho ezifana nokuguqula iifom .grd ukuya kwi-ESRI ukwenza uhlalutyo, ukungenisa ii-rasters ngaphandle kwedatha yendawo (i-georeferenced) ukusuka kubunzulu bomphezulu kwaye uzibonele nge-3D ngendawo ekuyo ngqo, faka iisimboli okanye iiphalethi ezimiselweyo zemibala kwiimveliso zakho, phakathi kweminye imisebenzi eya kukunceda. Ungalibali ukuyikhuphela, kuba isimahla: https://www.geosoft.com/products/add-in-for-arcgis-pro
Intsha yesiGIS esiyinkimbinkimbi kukuhlanganiswa kwayo web, ukudibanisa ArcGIS Online, Ekuvumela ukuba: apapashe iimaphu, imisebenzi, okanye itemplates zakho geoprocessing kwaye uhlole abanye, uthenge ngetyala ukugcina data, ukufikelela kwezinye isiqulatho premium, umxokozelo kunye nokusetyenziswa izicelo ezivela isikhangeli kunye / okanye izixhobo ezihambayo, phakathi kwabanye.
Xa uqedile iiprojekthi zakho unokwenza iiphakheji zeprojekthi okanye Iprojekthi yePakethe, namanye amalungu umbutho wakho, ungenza kuyihlaziya rhoqo njengoko kuyimfuneko, ekubeni umhla ukulungiswa le ipakethe nganye ezinxulumene kunye noogxa bakho download uguqulelo iprojekthi ukuba awuqinisekanga necesiten.Si ukuba yintoni isixhobo ngasinye, hambisa phezulu iqhosha kwaye ikubonise kwiziseko imisebenzi yabo.
Iincwadi kunye nezixhobo ezidalwa zingasetyenziselwa kwi-ArcGIS Pro, kunye nezinye izinto kunye nokuguqulwa, kuba iP isebenzisa iPhyton 3.5 kwaye I-ArcMap isebenzisa inguqulo ye-2.7. Isixhobo sePhyton sinokufumaneka kwimenyu yokuHlola.
ESRI sele isiqinisekisile ukuba iPro izakufaka endaweni ArcMap, ziya kugxininiswa kwiinkqubela kunye nokuhlaziywa kwePro, kuba njengoko siyazi ukuzakhela ArcMap Yi-32-bit, eyenza ukuba kungabinakho ukwazisa ngohlaziyo olubalulekileyo, kodwa usenokuhlala kunye okwethutyana, ubuncinci kude kube ngu-2022, ngelixa uyiqhela ungaqhubeka nokusebenza kwiiprojekthi zakho. mxd ukusuka kwiArcMap, .3dd ukusuka kwiArcGlobe, kunye .sxd ukusuka kwiArcScene kwiPro.
Ukufaka i-ArcGIS Pro
Ukuba ufuna ukufaka iArcGIS Pro, kuya kufuneka ulandele la manyathelo alula:
1. Kuya kufuneka wenze iakhawunti kwi-ESRI ukuze ufumane ilayisensi kamva kwimveliso, uya kufumana ifom yokuqala ukuvavanya uvavanyo lwakho lwetyala iintsuku ezingama-21.
2. Faka iakhawunti yam ye-Esri kwaye uqwalasele umbutho wakho, oku kubalulekile, kuba xa uvula isicelo, i-imeyile kunye nedatha enxulumene ne-ESRI iya kuvela.
3. Khangela iqhosha lokukhuphela ingxelo yakho yesilingo kwi-Esri yam, http://my.esri.com, iyahambelana ne-Windows 7, i-8 ne-8.1. hlola iimfuno zeenkqubo ukuze usebenze kakuhle kwi-PC yakho.
4. Emva kokuba usebenze isifaki, ngena ku-esri.com, yiya kwithebhu yokulawula iilayisensi kwaye ukhethe ukhetho lokumisela iilayisensi, qiniseka ukwenza kusebenze izandiso kwaye ubonise ASSIGN.
5. Ilayisensi yakho iqwalaselwe kwaye ngoku unokuqhuba usetyenziso.
6. Uya kucelwa iinkcukacha zakho ze-ESRI kunye ne-voila! Ngoku ungasebenzisa iArcGIS Pro.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Ukuvakala komsindo kunye nevidiyo kunye ne-Screencast-o-matic kunye ne-Audacity.
Post Next Skrill -enye indlela yokuhlawula i-PaypalOkulandelayo »